Igbe mkpuchi mkpuchi silik maka koleos
Nkọwa:Ikpuchi igodo Koleos Renault,Akpata Igodo nke Kolo na Renault,Kuki mkpuchi Silicone kpochapu Renault
Home > Ngwaahịa > Epeepe mkpuchi Silicone Car > Igbe mkpuchi mkpuchi silik maka koleos
Ihe Nlereanya.: Renault3005
Ubu oke: 10000pcs for one day
Ụwa di nma nke co.Ltd na-elekwasị anya n'inwe ihe mkpuchi mkpuchi ụgbọ ala silicone ruo afọ 8. Ahụmahụ bara ọgaranya na-eme ka ọkpụkpụ ụgbọala anyị ọ bụla ruo na ntinye ederede n'otu ụlọ ọrụ ahụ. Ikpuchi mkpuchi Silicone bụ ire ọkụ nke mkpuchi mkpuchi anyị dị na silicone . Nke a na-agbaso ụdị nke ikpo okwu koleos isi na -enweghị ụgbọ ala, 3 bọtịnụ a na-agbanye . Ọ na-ewu ewu na ahịa Europe maka mkpuchi mkpuchi koleos .
2. Ihe mkpuchi mkpuchi ụgbọ ala ahụ dị na ya dị mma maka igodo ụgbọ ala gị .
3. Anyị nwere uru ọnụahịa nke isi mkpuchi siliki ma ọ bụrụ na ị nwere nnukwu.
4. Ọdịdị okpomọkụ: -40 centigrade na 2 20 centigrade.
5. Ihe ntinye igodo nso nwere njirimara nke enweghi ihe ojoo, gburugburu ebe obibi nke enyi, ihe ngbochi nke oku, ihe siri ike, ihe mmiri na-ekpuchi, uzuzu uzuzu.
6. Ọdịdị ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta isi okwu ụgbọala nwere ike izipu ajụjụ gị. Ụdị agba ọ bụla anyị nwere ike ịmere gị. Ị ga-ahụ n'anya mkpuchi mkpuchi ụgbọ ala mgbe ị nwere ya.
2. 1000pcs silicone key key in one cardon
Ọrụ anyị maka mkpuchi uhie ụkwụ na silicone na mkpuchi mkpuchi dị n'ime ya
anyị bụ ọrụ ISO9001 na BSCI
9. niile ngwaahịa nwere ike ịfe SGS na FDA na nyocha ọ bụla ọzọ.
Ikpuchi igodo Koleos Renault Akpata Igodo nke Kolo na Renault Kuki mkpuchi Silicone kpochapu Renault Ikpuchi igodo nke Renault Ikpọchi igodo Renault Ikpuchi igodo Renault 2017 Igodo mkpuchi igodo maka Renault Mkpọchi Igodo nke Renault